Musuqa iyo Maamul-Xumada Wasiirka Maaliyadda Somaliland Samsam Cabdi Aadan Jiilaal
Musuqa iyo Maamul-Xumada Wasiirka Maaliyadda Somaliland Samsam Cabdi Aadan Jiilaal
Wednesday March 08, 2017 - 10:46:09 in by Samiir Cabdi
Waxa aan qormooyinkan ku eegi doonaa maamul-xumadii, musuqii iyo maroorkii ay dhaqanka ka dhigatay Samsam Cabdi Aadan oo ah wasiirka maaliyadda Somaliland, isla markaasna hore u noqotay Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare. Runtii waa haweenaydii kowaad ee labadaas xilba ummadda u qabata. Inta aynaas faaqidaaddaas gudo-gelinna waxa aynu cabbaar milicsan doonnaa sooyaalka masuulka ay diiraddeennu saaran tahay.
Wasiir Samsam waxa ay wax ku baratay Jaamacaddii Lafoole, markii dambena waxa ay ka hawlgeli jirtay Akadamigii Fanka iyo Cilmiga Soomaaliya. Walaw ay da’ ahaan qof weyn tahay, waxa ay xilliyo dambe guursatay Marxuum Maxamed Xuseen Caabbi oo 2011kii ku geeriyooday carriga Ingiriiska, waxaanu Eebbe kala siiyay hal gabadh ah. Inta badan waxa ay nolosheeda ku qaadatay qoys la’aan iyo barbaarnimo.
Xilliyadii ay socdeen dagaalladii dib-u-xoreynta Somaliland (1988-1991) waxa ay ku shaqayn jirtay laba dhinac: mar waxa ay ahayd ergay dawladda kacaanka ka tirsan, marna waxa ay ahayd qof samafal u samaynaya mujaahidiinta iyo dadka la barakiciyay. Taasna waxa ay baaqyo ku gaadhsiin jirtay caalamka.
Xilligii uu talada hayay xisbiga UDUB, waxa ay Wasiir Samsam ka mid ahayd dadka u ololeeya xisbiga KULMIYE, waxa ay se xidhan jirtay shaadhka ururrada aan dawliga ahayn. Wasiir Samsam waxa ay madax u ahayd dallad lagu magacaabi jiray SHURO NET oo qaabbilsanayd xuquuqal-insaanka, waxaana si dadban ula maamuli jirtay Marwada Siilaanyo.
Nasiib-wanaag waxa haayaddaas albaabbada loo laabay kaddib markii la ogaatay in tahay guri ay mucaaridku ku dhuuntay, waxaana aqoonsiga kala laabtay wasaaradda Caddaaladda oo ay madax ka ahaayeen Wasiir Axmed Xasan Cali (Casoowe) iyo Marxuun Yuusuf Ciise Ducaale (Tallaabo) oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caddaaladda ahaa.
Mar kale waxa ay Marwo Samsam Cabdi Aadan iyo aqoonyahannadii SHURO NET ku dhawaaqeen dhismaha Center for Dialogue and Human rights, nasiib-darro markii la daah-furay xaruntan ayaa iyadana albaabbada loo laabay si la mid ah SHURO NET. Ragga hawshaas kaalinta ka qaatay waxa ka mid ahaa Prof Mubaarig Ibraahin Aar oo imaka ah Guddoomiyaha Jaamacadda Beder ee Hargeysa iyo Prof Aadan Xaaji Cali Axmed Guddoomiyaha Maxkmadda Sare ee Somaliland.
Cadaadiska la saaray Samsam Cabdi Aadan oo ay saaxiibbo dhaw ahaayeen Aamina Sheekh Maxamed Jirde (Aamina-Weris) waxa loo tirinayay in ay ka dambaysay Marwo Huda Barkhad Aadan Marwadii Madaxweyne Rayaale. Falalkaas bannadaadda ahi waxa ay sababeen in ay Marwo Samsam Cabdi Aadan ka baxdo saaxaddii ururrrada rayidka, isla markaasna ay toos ugu biirto Xisbiga KULMIYE. Iyada oo ka mid ahayd dadkii sida adag ugu ololeeyay guushii KULMIYE ee 2010ka, ayaa waxa ay abaal-marin u heshay Wasiir aan dhicin. Waxaana ilaalinta kursigeedan kaalin weyn ku leh marwada madaxweyne Siilaanyo oo ay saaxiibbo dhow ahaayeen tan iyo markii ay talada haysay xukuumaddii kacaanku.
Wasiir Samsam waxa ay ka mid tahay koox haween ah oo ay talada dalku ka go’do. Waxa aynu sagaal qormo oo dambe ku eegi doonnaa qardoofooyinka iyo qaladka ay ku kacday Wasiir Samsam intii ay masuulka ka ahayd labadaas wasaaradood.